ပြည်နယ်ပေါင်း(18)ခုမှာ မဲရေတွက်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် Biden က ဦးဆောင်နေ – King Of Future
115 Comments	/ News / By codexmyanmar
ယခုအချိန်တွင် U.S သမ္မရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲရေတွက်နေပြီဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိ ပြည်နယ်(18)ခုတွင် မဲရေတွက်ပြီးစီးလုနီးပါးအချိန်၏ ရလဒ်တွင် ဒီမိုကရက်တစ် ကိုယ်စားလှယ် Joe Biden က ရီပတ်ဘလီကန် သမ္မတ Donald Trump ကို ဦးဆောင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
Washington D.C,New York, New Jersey, New Mexico ပြည်နယ်များတွင် Biden က အနိုင်ရနေပြီး South Dakota, North Dakota,Wyoming,Louisiana နှင့် Nebraska ပြည်နယ်များတွင်မူ Trump က အနိုင်ရထားသည်။
အဓိကကျသော မဲယိမ်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Florida တွင်မူ Trump ကအသာရထားကြောင်း သိရှိရသည်။
မဲယိမ်းပြည်နယ်များဖြစ်သည့် ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ အရီဇိုးနား၊ တက္ကဆက်တိုတွင် အကြိတ်အနယ် ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နေကြသည်။
မဲယိမ်းပြည်နယ်များဖြစ်သော Pennsylvania, California, Arizona နှင့် Texas ပြည်နယ်များတွင်မူ အကြိတ်အနယ်ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နေကြကြောင်း သိရှိရသည်။
Floridaတွင် မဲစုစုပေါင်း (94)% ရေတွက်ပြီးစီးချိန်တွင်မူ Trump က (51.2)% အသာရထားပြီး Biden က (47.8)% ရရှိထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
# CBS News မှ ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါသည်။
170 Comments	/ News / By codexmyanmar
115 thoughts on “ပြည်နယ်ပေါင်း(18)ခုမှာ မဲရေတွက်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် Biden က ဦးဆောင်နေ”
Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say you have doneaexcellent job with this. Also, the blog loads super quick for me on Safari. Excellent Blog!|
Viagra Pfizer Nebenwirkungen best place to buy cialis online
Hi there everybody, here every person is sharing these kinds of experience, thus it’s good to read this webpage, and I used to payavisit this webpage everyday.|
Greetings! I’ve been reading your web site for some time now and finally got the courage to go ahead and give youashout out from Lubbock Tx! Just wanted to say keep up the great work!|
vpn routers best buy c
gay nude video chat n
Aidere levitra 10 orodispersible 10mg
words to use in an essay r
define essay r
When treating these infections doctors give antibiotics for both and treat both partners. order prednisone from canada Krnzzw Buy Viagra Without Rx